Imbwa Makorasi Sunga Leashes Vagadziri & Vatengesi | China Imbwa Makorasi Sunga Leashes Fekitori
Iyo inogadziriswa oxford imbwa simbi izere neyakagadzikana chipanje, hachisi kusagadzikana pamutsipa wembwa, iyo yakagadzirirwa dhizaini yako imbwa.
Chinogadziriswa oxford imbwa simbi inogadzirwa neYepamusoro mhando yekufema mesh zvinhu. Iyo inochengeta chako chipfuwo chine rudo chakanaka uye chinotonhorera apo uchikuchengeta iwe mukutonga kwese.
Iyo yekuwedzera mubato pamusoro peiyi tambo inoita kuti zvive nyore kudzora uye kufamba zvakaoma kudhonza uye imbwa dzakura.
Iyi inogona kuchinjika oxford imbwa simbi ine 5 saizi, yakakodzera kune madiki epakati nepakati imbwa hombe.
Iyo inoratidzira machira imbwa kora yakagadzirirwa ne nylon webbing uye yakapfava, inofema mesh. Iyi premium collar haina kureruka uye inobatsira kudzikisira kutsamwa uye kukwiza.
Inoratidzira machira imbwa kora yakagadzirwawo ine inoratidzira zvinhu.it inobatsira kuchengetedza mwana wako akachengeteka nekuwedzera kwake kuoneka panguva yeusiku kufamba.
Ino inoratidzira machira imbwa kora ine yepamusoro-soro D mhete. Paunobuda nemwana wako, ingo batanidza leash kune yakasarudzika isina simbi-simbi mhete uye tora kufamba nekunyaradza uye nyore.
Iyo imbwa chengetedzo sunga pamwe nechigaro chebhanhire ine yakazara yakazara padhesheni vest nzvimbo. Iyo inochengetedza shamwari yako ine furry kugadzikana panguva yekufamba.
Imbwa chengetedzo sunga nebhandi repachigaro yakadzora mutyairi kukanganiswa. Imbwa chengetedzo sunga inochengetedza imbwa dzako zvakachengeteka zvakachengeteka muchigaro chavo kuti ugone kutarisa mumugwagwa uchifamba.
Iyi imbwa chengetedzo sunga nebhandi repachigaro zviri nyore kuisa uye kubvisa. Zviise pamusoro wembwa musoro, wozozvisunga, uye gadzirisa tambo sezvaunoda, sunga bhandi rekuchengetedza kuD-ring uye sunga bhandi repachigaro.